The Best Public Service Feature Award – Yangon Journalism School
Basic Journalism Training
Feature Writing Training
Training for Editors @ Editors’ Retreat
Investigative Reporting Training
Specialized Reporting Trainings
The Best Public Service Feature Award
By ထက်အာကာကျော် မိုးကျော် On Thu, 2017-11-09 22:30 Issue No. အတွဲ (၁၆)၊ အမှတ် (၃၅)
‘‘သူ့ဗိုက်ကို ခွမကျော်နဲ့၊ ငရဲ ကြီးတတ်တယ်’’
‘‘သူ့ဗိုက်ထဲမှာ ဌာပနာတွေ ရှိလို့’’
ဘုရားလှူသည့် ပိုက်ဆံခိုး စားသူများကို ရည်ညွှန်းသည့် လူရွှင်တော်များ၏ နာမည်ကြီးပြက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
‘ဘုရားအလှူငွေတွေ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသင့်ပြီလား’ ဟူသည့်မေးခွန်းကို ကျိုက်ထီးရိုးစေ တီတော်၏ ၂ နှစ်အတွင်းရရှိခဲ့သည့် အလှူငွေကိန်းဂဏန်းနှစ်ခု အဖြေပေးသည်။ ၂ နှစ်အတွင်း ငွေကြေးကွာဟမှုက ကျပ်သန်း လေးထောင်ကျော် ရှိနေ၍ဖြစ်သည်။
ဂေါပကအဖွဲ့ဟောင်းက အဖွဲ့သစ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့်ငွေသည် သန်းတစ်ထောင်ကျော်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဂေါပကအဖွဲ့သစ်တက်လာပြီးနောက် တစ်နှစ်အတွင်းအလှူငွေရရှိမှုသည် ကျပ်သန်းငါးထောင်ကျော်ဖြစ်သည်။
ရွှေဆိုင်းလုပ်ငန်းတွင် ယခင် ဂေါပကအဖွဲ့လက်ထက်က ၆၃၈ သိန်းရရှိပြီး အဖွဲ့သစ်တွင်မူ ၉,၆၈၅ သိန်းရရှိသည်။ အလှူခံ ပုံးကဏ္ဍတွင် ယခင်အဖွဲ့က ကျပ် ၄၁၁ သိန်းရရှိပြီး လက်ရှိဂေါပက လက်ထက်တွင်မူ ၅,၂၉၈သိန်းရရှိ သည်။ ဆည်းလည်းလုပ်ငန်းတွင် လည်း ယခင်က ကျပ် ၁၆၇သိန်း သာရရှိခဲ့ပြီး အဖွဲ့သစ်လက်ထက် တွင်မူ ကျပ် ၂,၅၂၁ သိန်းရရှိသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ‘ရေဘူးနဲ့ဖိနပ်မပါရင် နွေခါမှသိမယ်။ ဒါနနဲ့သီလမပါရင် သေခါမှသိမယ်’ဟူသော အဆုံးအမဖြင့် ကြီး ပြင်းခဲ့ကြသည်။ ‘အလှူဆိုတာ ပြတ်မှ မွန်မြတ်တယ်’ဟူသောအ ဆုံးအမကြောင့် လှူပြီးသားပိုက်ဆံ များ ဘယ်ရောက်သွားသလဲဟု ဘယ်တော့မှ မေးခွန်းမထုတ်ခဲ့ကြ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် လှူ ဒါန်းခြင်းကိစ္စကို မွန်မြတ်သည်ဟု အဆုံးအမခိုင်မာသည်။ ရန်ကုန် ရောက်လျှင် ရွှေတိဂုံစေတီ၌ လှူ သည်။ မွန်ပြည်နယ်ရောက်လျှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ၌ လှူသည်။ မန္တလေးရောက်လျှင် မဟာမုနိ ဘုရား၌လှူသည်။
အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ် အဘွားဒေါ်ခင်နွဲ့သည် ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်းမှ နှစ်ရာတန်အသစ်ကျပ် ချွတ်များကို ဆွဲထုတ်၍ ‘ဘက်စုံငွေ ပဒေသာပင်’ ဟုရေးသားထား သော မှန်ပုံး၏ အပေါက်လေး ပေါက်ထဲသို့ တစ်ရွက်ချင်းစီ ထိုး ထည့်လိုက်သည်။
ရန်ကုန်မြို့နေ အဘွားဒေါ်ခင်နွဲ့က မိုင်ပေါင်းလေးရာကျော် ခရီးနှင်၍ မန္တလေးမြို့မဟာမုနိဘု ရားကြီးကို လာရောက်ဖူးမြော်စဉ် ဝတ်ပြုသည့်နေရာအနီးရှိ အလှူခံပုံးအတွင်းသို့ အလှူငွေရှစ်ရာကျပ် ထည့်နေခြင်းဖြစ်၏။
ကမ္ဘာလှည့်ဘုရားဖူးဧည့်သည်များနှင့် မြန်မာပြည်သူများ မန္တလေးမြို့သို့ရောက်ရှိလျှင် မဖြစ်မနေသွားရောက်လေ့ရှိသည့်နေရာသည် ဘုရားကြီးဟုမြို့ခံများသုံး နှုန်းသော မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော် မန္တလေးမြို့တွင် သမိုင်းအမွေအ နှစ်တန်ဖိုးများရှိသည့် အခြားသော အထင်ကရနေရာများစွာရှိသော်လည်း မြို့ခံများက မဟာမုနိဘုရားကြီးကို မန္တလေး၏အသည်းနှလုံးအဖြစ် ခံယူကြသည်။
‘‘နှစ်ရာတန်အသစ်တွေကို ဘဏ်ကနေ သေချာလဲလာခဲ့တာ။ အဘွားတို့က မြတ်မြတ်နိုးနိုးလှူ ဒါန်းသလို ဒီအလှူငွေကို ဘုရား ကြီးကောင်းကျိုးအသုံးပြုမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်’’ ဟု ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေးလေးနက်နက်သက်ဝင်ယုံ ကြည်သည့် အဘွားဒေါ်ခင်နွဲ့က ခပ်ဖြည်းဖြည်းပြောသည်။
အဘွားဒေါ်ခင်နွဲ့ကဲ့သို့ပင် မဟာမုနိဘုရားကြီးသို့ ရပ်ဝေးရပ်နီးမှဘုရားဖူးများ နေ့စဉ်သောင်း နှင့်ချီ၍ လာရောက်နေပြီး အလှူ ငွေသည်လည်း တစ်ရက်လျှင်ပျမ်းမျှကျပ်သိန်းငါးဆယ်ခန့် ရရှိနေသည်။ ယင်းပမာဏသည် နိုင်ငံ့ ဦးသျှောင်သမ္မတဦးထင်ကျော်၏ တစ်လစာလခနှင့်ညီမျှသည်။
မဟာမုနိဘုရားကြီး၏ အလှူငွေရရှိမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မန္တလေးမြို့ခံသတင်း ထောက်များက မကြာခဏစုံစမ်း မေးမြန်းလေ့ရှိသော်လည်း ယခင် ဂေါပကအဖွဲ့များလက်ထက်တွင် တိကျသည့်အဖြေ များမရရှိခဲ့ပေ။ ဘုရားကြီး၏ အလှူငွေအသေးစိတ်နှင့် သုံးစွဲသည့်အခြေအနေကို ပြည်သူလူထုသိရှိရန် ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်းလည်း မရှိခဲ့ပေ။
သို့ရာတွင် လက်ရှိဂေါပက အဖွဲ့ကမူ ဘုရားကြီး၏အလှူငွေ နှင့် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုများအပေါ် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှ ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်် သတင်းမီဒီယာများအပါအဝင် ပြည်သူများသိလိုသည့်အချက်များကို လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းက ပြောသည်။
‘‘ကျွန်တော်တို့မှာဝှက်ဖဲမရှိပါဘူး’’ ဟု ၎င်းကယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ပြောသည်။
ဘုရားကြီး၏ ယခင်ဂေါပက အဖွဲ့လက်ထက်၌ အလှူငွေ စုစု ပေါင်း ကျပ်ကိုးဘီလီယံကျော်ရှိပြီး လက်ရှိတွင် ကျပ် ၁၀ ဒသမ ၃ ဘီလီယံကျော်နှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းရှိကြောင်း ဦးစိုးလင်းက နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်တွင် သတင်းထောက်များအား ပြောသည်။
အဆိုပါ ငွေကြေးများကို ဘဏ်များတွင် အပ်နှံထားပြီး တစ်လလျှင် ဘဏ်တိုးကျပ်သိန်းတစ်ရာကျော်ရရှိနေသည်ဟု ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိဂေါပကအဖွဲ့သည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်က တာဝန်လွှဲပြောင်းယူခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့ လက်ထက်တွင် ယခင်ဂေါပကအဖွဲ့ထက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပို မိုလုပ်ဆောင်နေသည်ဟု မြို့ခံများက ထောက်ခံပြောကြားသည်။ သို့သော် ဘုရားကြီးပရဝဏ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိရန် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ပြန်မ ကြေညာခြင်းသည် ယခင်ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထူးမခြားနားဖြစ် သည်ဟု မြို့ခံများက သုံးသပ်သည်။
ဘုရားကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ ‘ဝှက်ဖဲ’မရှိဟု အခိုင်အမာပြောကြားထားသည့် ဦးစိုးလင်းက အလှူငွေလက်ခံရယူမှုအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို သတင်းစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ (SB)မှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့်သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိ ဂေါပကအဖွဲ့တွင် ယခင်အဖွဲ့များကဲ့သို့ အငြိမ်းစား အရာရှိကြီးများ ပါဝင်မှုနည်းပါးပြီး အသက်(၄၀)ခန့် လူလတ်ပိုင်းများဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင် ကြောင်းနှင့် အပြောင်းအလဲကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း ပန်းချီဆရာကြီးဦးစိန်မြင့်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
ဦးစိန်မြင့်သည် ယခင်ဂေါပကသက်တမ်းတွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး အနက် အနုပညာသည်အနေဖြင့် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သို့ ရာတွင် ဘုရားကြီးဂေါပကအဖွဲ့သက်တမ်းတစ်ခုလျှင် လေးနှစ်စီသတ်မှတ်ထားရာ ဦးစိန်မြင့်သည် သုံးနှစ်သာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး နောက်ဆုံးတစ်နှစ်၌ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိဟုဆိုသည်။
ယခင် ဂေါပကအဖွဲ့များလက်ထက်တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အမှားအယွင်းများရှိခဲ့ ကြောင်း၊ ယခုဂေါပကအဖွဲ့သည်လည်း လက်ရှိအခြေအနေကိုဆက် ထိန်းနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိန်မြင့်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
ဦးစိုးလင်း ခေါင်းဆောင်သည့်ဂေါပကအဖွဲ့စတင်တာဝန် ယူချိန်တွင် ပထမဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် ခေါင်းစဉ်သုံးမျိုးဖြင့် ဧည့်ခံစရိတ်ထဲမှ ဂေါပကအဖွဲ့၏ ဧည့်ခံစရိတ်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဧည့်ခံစ ရိတ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများဧည့်ခံ စရိတ်ကို ဆက်လက်ထားရှိခဲ့ သည်။
လက်ရှိ ဂေါပကအဖွဲ့၏ နောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုက ၁၅ ဦးသောဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင် အလုပ်ကြိုးစားပြ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ဦးစိုးလင်းက ဆိုသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဘုရားကြီး၏ ဝေယျာဝစ္စဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ထမ်း ၂၇၀ ၏ ဦးဆောင်လမ်း ပြကောင်းများ ဖြစ်လိုသည်ဟု ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဘုရားကြီးအတွက် တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် လုပ်ငန်း ၂၁ မျိုးရှိကြောင်း ဦးစိုးလင်းက ဂုဏ် ယူစွာပြောသည်။ ယခင်ဂေါပကအဖွဲ့ကို ရည်ညွှန်းသည့်သဘော ဖြင့် ‘‘သူတို့လုပ်တာနဲ့ ကျွန်တော် လုပ်တာမတူဘူး’’ ဟု ၎င်းက သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံ စဉ်ပြောသည်။
သို့ရာတွင် ယခင်ဂေါပကအဖွဲ့၏ အလှူငွေစီမံခန့်ခွဲသည့် အ ခြေအနေကို ဖြေဆိုရန် ဦးစိုးလင်းက ငြင်းဆိုသည်။
လက်ရှိဂေါပကအဖွဲ့တွင် စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုပါဝင်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းသုံးဦးသာ ပါဝင်သည်။ ဦးစိုးလင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသကြားနှင့် ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
ဘုရားကြီးစောင်းတန်းတွင် ဈေးရောင်းနေသူအချို့နှင့် မန္တ လေးမြို့ခံများက လက်ရှိဂေါပကအဖွဲ့သည် အလုပ်လုပ်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုကြပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများအကြောင်းနှင့် များ ပြားလှသော အလှူငွေကိစ္စရပ်များ ကို အများပြည်သူသိရှိရန် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ကြေညာသင့်ကြောင်း အကြံပြုသည်။
သို့မှသာ ဘုရားကြီးအတွက် ဘုရားဖူးပြည်သူများထည့်ဝင်နေ သော အလှူငွေများသည် မည် သည့်ကဏ္ဍ၌ အသုံးပြုနေကြောင်း သိရှိကာ လှူဒါန်းလိုစိတ် ပိုမိုဖြစ် ထွန်းလာမည်ဟု အရှေ့ဘက် စောင်းတန်းရှိ ဈေးသည်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
‘‘အခုဂေါပကအဖွဲ့က အလုပ်တော့ တော်တော်လုပ်တယ်။ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုလည်းများတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှတော့ အကောင်အထည်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးဘူး’’ ဟု ၎င်းကမှတ်ချက်ပြုသည်။
နာမည်ကြီးဘုရားတစ်ဆူဖြစ် သည့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်၏ အလှူငွေရရှိမှုအ ခြေအနေကို သတင်းမီဒီယာမှတစ်ဆင့် မကြာခဏပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုများက ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီချုပ်အစိုးရတက်လာပြီး နောက်နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ နာမည်ကြီးဘုရား၊ စေတီများ၏ဂေါပက အဖွဲ့များကို အပြောင်းအလဲပြု လုပ်ခဲ့ပြီး ဂေါပကအဖွဲ့များအပေါ်တွင်လည်း ပြည်သူလူထုက အ ကောင်းဆုံး မျှော်လင့်ထားကြ သည်။
ဂေါပကအဖွဲ့ကဲ့သို့ အများ ပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ဆောင် ရွက်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးသင့် ကြောင်းနှင့် သို့မှသာမလိုအပ် သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များရှိပါက ထောက်ပြဝေဖန်အကြံပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံစာရေး ဆရာသိုက်ထွန်းသက်က မှတ် ချက်ပြုသည်။
‘‘မမှန်ကန်ဘူး၊မှန်ကန်တယ် အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပွင့် လင်းမြင်သာမှုနဲ့ထုတ်ပြန်ဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်’’ ဟု ၎င်းက ပြော သည်။
လက်ရှိဂေါပကအဖွဲ့ဆောင် ရွက်သည့်အခြေအနေကို မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီ ရင်ခံတင်ပြမှုများရှိသော်လည်း အ စိုးရတာဝန်ရှိသူများက ယင်းအစီ ရင်ခံစာများကို စစ်ဆေးဖတ်ရှုနိုင် မည်မထင်ကြောင်း ဦးစိန်မြင့်က ၎င်း၏အမြင်ကို ပြောသည်။ဘုရား ကြီး၏ဘဏ္ဍာငွေနှင့်အလှူငွေများ ရရှိမှုပုံစံ များပြားလှခြင်း၊ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နေရသည့် လုပ်ငန်း များ ပျားပန်းခပ် ဖြစ်နေခြင်း ကြောင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ ကို ဖော်ထုတ်ရမည်မှာ များစွာရှုပ် ထွေးခက်ခဲသည်ဟု ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
‘‘ဒီကိစ္စတွေဖြေရှင်းရင် လူ တစ်ရာနဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်’’ ဟု ဦးစိန်မြင့်က ဆိုသည်။
များပြားလှသည့်ဝန်ထမ်း များ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရှိနေ ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား နေ့စဉ် လိုက်လံစိစစ်မှုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင် သေးကြောင်း ၎င်းကမှတ်ချက်ပြု သည်။ ဦးစိုးလင်းကမူ ဘုရားကြီး ဝန်ထမ်းများ မဟုတ်မမှန်လုပ် ဆောင်ပါက အရေးယူမည်ဟုပြတ် ပြတ်သားသားပြောသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက်မဟာမု နိဘုရားဂေါပကအဖွဲ့နှင့်ဝန်ထမ်း များအကြား အကျင့်ပျက်ခြစား၍ ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြု လုပ်၍ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာသို့တိုင် ကြားခြင်း၊ ပြဿနာပေါ်ပေါက်ခဲ့ ခြင်းများမရှိခဲ့ပေ။ သို့သော်ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကြီးဗိုလ်တထောင် စေတီတော်တွင်ဂေါပကအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးကျပ်သိန်းခုနစ်ရာကျော် အ လွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့၍ တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ သည့်ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအထွတ်အမြတ်ထားရာ ဘုရားစေတီများတွင် ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စား၍ လုပ်ကိုင်နေသည့် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များကို မြန်မာပြည်သူအများစုက ယုံမှားသံသယစိတ်ထားလေ့မရှိ ကြပေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအရဘု ရားငွေကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပါက အပါယ်ငရဲကျမည်ဟု ယုံကြည်ထားသည်။
ငယ်ရွယ်နုပျိုစဉ်ဘုရားကြီး သို့ ငါးကြိမ်ရောက်ဖူးခဲ့ပြီး ဆယ်စု နှစ်သုံးခုကျော်အကြာတွင် သား သမီးမြေးမြစ်များနှင့်အတူ ခြောက် ကြိမ်မြောက်လာရောက်ဖူးမြော်ချိန်၌လည်း အဘွားဒေါ်ခင်နွဲ့၏ လှူဒါန်းလိုစိတ် သဒ္ဓါတရားက ထက်သန်နေဆဲပင်။
အလှူခံပုံးအတွင်း အဘွား ဒေါ်ခင်နွဲ့ထည့်ဝင်လိုက်သည့် ငွေ ကြေးအပါအဝင် ပုံးအတွင်းရှိ ငါး ဆယ်ကျပ်တန်မှ တစ်သောင်းကျပ် တန်အဆုံးအမျိုးမျိုးသော များပြား လှသည့်ငွေကြေးများကို ဘုရား ကြီးအတွက်ပင် ပြန်လည်အသုံးပြု မည်ဟု ၎င်းကယုံကြည်သည်။ ဘုရားကြီးအလှူငွေများကို အလွဲ သုံးစားပြုလုပ်မည့်သူများအတွက် အဘွားဒေါ်ခင်နွဲ့က ယခုလိုမှတ် ချက်ပြုသည်။ ‘‘ဒီငွေတွေ အလွဲသုံး စားလုပ်တော့ သူတို့ပဲအပါယ်လေး ဘုံကျမှာပေါ့’’
Basic Journalism Training – MJS
Basic Journalism Training – 2017
Basic Video Journalism Manual
YJS Feature Writing Awards – 2017
No.96, 4th Floor, Upper Pazundaung Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar.
Yangon Journalism School (YJS), the first independent private journalism school in Myanmar, was founded in 2009 in Yangon. However its trainers have been teaching journalism in the nation since 2003.
Copyright © 2021 | Yangon Journalism School | Powered by Kite Media